တစ်ကိုယ်လုံးအလှတွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လေး ပြသထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
တစ်ကိုယ်လုံးအလှတွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လေး ပြသထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
မမြတ်လေး လို့ အား လုံး က ချစ်စနိုး ခေါ်ကြ တဲ့ သရုပ် ဆောင် မင်းသမီး ချော အေးမြတ်သူ ကတော့ ချစ် စရာ ကောင်းပြီး ပွင့်လင်း တဲ့ ဟန်ပန် အပြော အဆို လေးတွေနဲ့ ဟန်ဆောင် မှု ကင်းတဲ့ နေထိုင် ပုံလေး တွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ အချစ်ပို ရတဲ့ သူလေး ပါ … . ဒါ့ပြင် သူမရဲ့ ကျော့ရှင်း လှတဲ့ အလှတရားလေး နဲ့ ဆွဲဆောင် မှုရှိ တဲ့ ပါးချိုင့် လေး ဟာလည်း ပရိသတ် ရင်ကို ထိမှန် စေပြီး အားလုံး ရဲ့ အချစ်တွေ ကို သိမ်းပိုက် ထားနိုင် တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
အေးမြတ်သူ ဟာ အခု ချိန်ထိလည်း အရွယ်တင် နုပျိုနေဆဲ ဖြစ် ပြီး သူမရဲ့ အလှ တရား တွေဟာ ဆိုရင် လည်း ဆယ်ကျော်သက် တွေ အရှုံးပေးရ လောက်အောင် ကို လှပနေ တာ ပါ ။ အေးမြတ်သူ ဟာ အသက်(၃၀) ကျော် လို့ထင် ရက် စရာမရှိ အောင် ကို ခန္ဓာကိုယ် ပိုင်း ရော ၊ အသားအရည်တွေ ပါ လှပနေ တဲ့ မင်းသမီး ချော တစ်ယောက် ဖြစ် ပါ တယ်။ အေးမြတ်သူ ဟာ ကျန်းမာ ရေး လိုက်စား တဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပြီး တော့ အခု လက်ရှိမှာဆို ရင်လည်း workout လေ့ကျင့် ခန်း တွေ ပြုလုပ်နေ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ် … .
အခုဆို ရင် လည်း အေးမြတ်သူ ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကြိုးစား လုပ်နေ ရင်း ပရိသတ် တွေ အတွက် အလန်းစား ဗီဒီယို လေး ကို မျှဝေပေး လာခဲ့ ပါတယ်.. ။ အေးမြတ်သူ ဟာ အမြဲလို လို လေ့ကျင့်ခန်း တွေ ကြိုးစား လုပ် နေတာ ကြောင့် ပွဲအခမ်း အနား တွေတက် ရောက်တဲ့ အခါမှာ လည်း သူမရဲ့ ဘော်ဒီလေး ဟာ ကျော့ ရှင်းလှပ နေတာဖြစ် ပါတယ်..။ ကဲ…..ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက် ပါ တယ် နော်… .
မျမတ္ေလး လို႔ အားလုံး က ခ်စ္စနိုး ေခၚၾက တဲ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာ ေအးျမတ္သူ ကေတာ့ ခ်စ္ စရာ ေကာင္းၿပီး ပြင့္လင္း တဲ့ ဟန္ပန္ အေျပာ အဆို ေလးေတြနဲ႔ ဟန္ေဆာင္ မႈ ကင္းတဲ့ ေနထိုင္ ပုံေလး ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ အခ်စ္ပို ရတဲ့ သူေလး ပါ … . ဒါ့ျပင္ သူမရဲ့ ေက်ာ့ရွင္း လွတဲ့ အလွတရားေလး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိ တဲ့ ပါးခ်ိဳင့္ ေလး ဟာလည္း ပရိသတ္ ရင္ကို ထိမွန္ ေစၿပီး အားလုံး ရဲ့ အခ်စ္ေတြ ကို သိမ္းပိုက္ ထားနိုင္ တာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ေအးျမတ္သူ ဟာ အခု ခ်ိန္ထိလည္း အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေနဆဲ ျဖစ္ ၿပီး သူမရဲ့ အလွ တရား ေတြဟာ ဆိုရင္ လည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတြ အရႈံးေပးရ ေလာက္ေအာင္ ကို လွပေန တာ ပါ ။ ေအးျမတ္သူ ဟာ အသက္(၃၀) ေက်ာ္ လို႔ထင္ ရက္ စရာမရွိ ေအာင္ ကို ခႏၶာကိုယ္ ပိုင္း ေရာ ၊ အသားအရည္ေတြ ပါ လွပေန တဲ့ မင္းသမီး ေခ်ာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေအးျမတ္သူ ဟာ က်န္းမာ ေရး လိုက္စား တဲ့ မင္းသမီး တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ အခု လက္ရွိမွာဆို ရင္လည္း workout ေလ့က်င့္ ခန္း ေတြ ျပဳလုပ္ေန တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ … .
အခုဆို ရင္ လည္း ေအးျမတ္သူ ဟာ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြႀကိဳးစား လုပ္ေန ရင္း ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ အလန္းစား ဗီဒီယို ေလး ကို မၽွေဝေပး လာခဲ့ ပါတယ္.. ။ ေအးျမတ္သူ ဟာ အျမဲလို လို ေလ့က်င့္ခန္း ေတြ ႀကိဳးစား လုပ္ ေနတာ ေၾကာင့္ ပြဲအခမ္း အနား ေတြတက္ ေရာက္တဲ့ အခါမွာ လည္း သူမရဲ့ ေဘာ္ဒီေလး ဟာ ေက်ာ့ ရွင္းလွပ ေနတာျဖစ္ ပါတယ္..။ ကဲ…..ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္… .
Previous post အတွင်းသား ကောက်ကြောင်း အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးများ
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်တွေတုန်သွားစေမယ့် Mဆိုင်းလုနဲ့ မေတို့ရဲ့ ရေကူးကန်ထက်က အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး